Indlela yokunikeza ivolumu izinwele ezincane? Izindlela ezilula zokwengeza ivolumu izinwele ezincane.
Izindlela eziningana zokunikeza ivolumu izinwele ezincane.
Kwabesifazane, ukuya kumuntu wezinwele kuyisiko. Kulesi sikhungo ungashintsha izinwele zakho, uxoxe ngezinto zakamuva, nje ubukele ezinye izivakashi. Kuyathakazelisa ukubuka ukuthi abesifazane abakuzigabisi kanjani izinwele eziluhlaza beza nomsila omncane, "umsila" wekhanda ekhanda kuya enkosini. Futhi ngemva kwesikhashana basuka e-salon, bephethe izinwele zokunethezeka. Indlela yokunikeza ivolumu izinwele ezincane, sifunda kule ncwadi.
Abadwebi bafeza kanjani ushintsho lomlingo?
Konke kuqala nge-shampoo. Ukugeza izinwele zakho akukona nje ukususa imfihlo yezingqungquthela ezingaphansi komgwaqo kanye nomgwaqo omgwaqo. I-shampoo yesimanje ingenza izinwele zikhanye, zikhuni, zingalwela ukubola kwe-scalp futhi zivimbele isigaba esinqunyiwe semikhawulo.
Abanikazi bezinwele ezingenabo obukhulu, ama-shampoos akha i-volume afanelekile. Ochwepheshe emva kokugeza bawasebenzisa i-conditioner ekhethekile njengendlela ye-balm noma i-conditioner yezinwele. Umkhiqizo ofanelekayo ungatholakala kulebula. Uma ukwakhiwa kwe-balm noma i-shampoo kuhlanganisa amavithamini ahlukene, okubaluleke kakhulu i-vitamin B3, ama-amino acids, bese uchungechunge olufanelana nawe. Lezi zinto zenza izinwele ziyanwebeka futhi zingathandeki emithonjeni yemvelo enobudlova.
Uma ukwakhiwa kwemikhiqizo yokuhlanza izinwele kufaka phakathi ukukhishwa kwenetha, ungalindela ukubukeka kwevolumu, ngisho noma izinwele zingabonakali zimangalisa futhi zibuthaka. Futhi into yukuthi ukukhishwa kwesikhumba sikwazi ukusiza ingubo yezinwele, ukwandisa ivolumu futhi kuvuleke, kuqukethe izilinganiso ezincane.
Uma owesifazane ngokwemvelo enezinwele ezincane, kufanele athenge ikhamela ekhethekile nomphumela we-antistatic. Kodwa into esemqoka ukukhetha izinwele ezifanele. Izinwele ezibukeke kahle kakhulu, uma zihlonywe "ngezinyathelo", "izidakamizwa", "isiteli", hhayi kanye ncamashi. Izindebe ezinjalo zidinga ukuhlelwa kwansuku zonke, kulula ukuzenza ekhaya, ukuqoqa izinwele kanye nokushayela nxazonke.
Ivolumu eyengeziwe inganikeza indlela elandelayo. Lapho le ntombazane idla izinwele zayo nge-dryer eyisibopho, iphoqa ikhanda layo phambili. Ikhefu eliphathekayo kanye nokufudumala komoya okufudumele kuzosiza "ukuguqula" izinwele, okwenza ukuthi ukunyakaza kube kuhle kakhulu.
Imfihlo eyodwa ikhona endleleni yokulungisa. Noma yikuphi ukufiphaza kwezinwele noma izinwele kusetshenziselwa kuphela ezimpandeni zezinwele, hhayi kuzo zonke izinwele zekhanda. Ngakho, izinwele ziphakanyisiwe, futhi ukubeka kuhlelwe kahle.
Ngokuqinisekile, ochwepheshe abacebisi ukugqoka izinwele zakho ngemva kokugeleza kwamakhemikhali ngenyanga. Izindlela zanamuhla zizokwenza izinwele zibe mncane, ngoba izinwele azidingi nhlobo umphumela onobudlova obunjengendlela yokudweba ukhilimu, equkethe ama-antioxidants. Izinwele zakhe emva kokusakazwa kwamakhemikhali kungasondwa ngamaski, okungahle kulungiselelwe ngesisekelo sezithako zemvelo.
Uma ucabanga ukuthi nsuku zonke awudingi ukubeka izinwele ngesomisi ezinwele, ungasebenzisa ama-curl ahlanganiswe nge-velvet. Ungalimazi izinwele nge-microfilm emnene, kodwa uzokuvumela ukuba zome ngendlela engokwemvelo ngokuphelele, zinike izinwele ezikhazimulayo.
Ngemuva kwe-curler ene-flat comb namazinyo amancane, ungakwazi ukulinganisa izinwele zakho bese uzilungisa ngokulungisa. Kwenzeka ukuthi izinwele azisekeli isitayela, bese emva kwenqubo enjalo kungenzeka ukusebenzisa ukulungiswa okukhethekile. Uzokwenza ukuqina kwezinwele nokuvuthwa.
Kubalulekile ukunakekelwa kwezinwele, ukunaka uhlobo lwezinwele. Uma isikhumba esihlokweni sinamafutha, khona-ke ngosuku lwesibili izinwele sezivele "zinamafutha" futhi lapha akukho sitokisi esilondolozayo. Ochwepheshe bakutshela ukuthi ugeze lolu hlobo lwezinwele uma kudingeka, kodwa sebenzisa i-shampoo efanelekayo ukusetshenziswa njalo. Isikhumba esomile asikhiqizi okuningi, izinwele ezinjalo azikwazi ukugeza isonto.
Izindlela eziyisikhombisa kanjani ukunikeza izinwele zezinwele?
Izinwele zakho zincanyana futhi zishaya, futhi uphupha izinwele ezikhazimulayo. Akufanele usheshe ukuxazulula inkinga enjalo nge-perm. Ngaphezu kwalokho, akusho kubo bonke, futhi kuyingozi. Kunezindlela eziphumelelayo futhi ezilula zokunikeza ivolumu ezinwele. Ngokwezibalo, abesifazane abangu-90% bakhononda ukuthi izinwele azilutho ngokwanele. Kodwa abakwa-stylists nabadayisi bezinwele bathi kukhona indlela yokuphuma. Udinga nje ukhethe kahle izinwele zokugqoka izinwele nezinkampani, imikhiqizo yokunakekelwa yanamuhla, ukhokhele ngokwengeziwe ukubukeka kwakho, bese-ke izincomo zalabo abakuzungezile zinikezwa.
Ukunikeza ivolumu ngezinwele nge-shampoos evamile
Izinwele ezibomvu nezinwele zidinga ukuhlanza okujwayelekile nokuvame njalo. Sebenzisa lezi zimonyo ezenzelwe lolu hlobo lwezinwele. Ubuningi bezinwele bungabonakala bukhuliswe ngosizo lwemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele ne-Volume yesiqalo, okusho ukuthi ivolumu, futhi futhi ngosizo lwezinhlanzi. Wonke amalungiselelo okuzithokozisa ngaphansi kwaleli gama aqukethe izinto ezithinta izinwele. Ungabahlukanisa ngamaqembu amabili.
Iqembu lokuqala lihlanganisa ama-shampoos aqukethe i-silicone. Kuyinto evumelana ngayo nefilimu futhi ihlanganisa zonke izinwele ngokulingana kwayo yonke. Ama-shampoos anjalo enza izinwele zivuke, zikhulu futhi zikhanyise, kodwa hhayi isikhathi eside. Namuhla wageza izinwele zakho, futhi kubonakala kuwe ukuthi izinwele zakho sezibe ziluhlaza futhi zinzima. Konke lokhu kusebenza izinwele ezinhle ezivela emvelweni. Kodwa emini, izinhlayiya zothuli zihlala kwifilimu ye-silicone, izinwele ziba ezingcolile, futhi ekuseni zifuna ukugeza. Futhi lokhu kwenzeka nsuku zonke.
Iqembu lesibili lihlanganisa ama-shampoos angenawo abicah. Ngaphezu kwalokho, abaniki izinwele ngesimo, ivolumu, bakhanyise, kodwa baqinise futhi banake izinwele ezimpandeni kuya ezitheni. Umphumela uzobonakala uma umuthi onjalo uncediswa ngokukhulisa ivolumu yesimo sezulu noma ibhalsamu. Faka isicelo kusukela emkhatsini wezinwele, kancane kancane uthuthele ezitheni. Izinwele emva kokusetshenziswa kwezi zimali kalula futhi zihlanganise.
Ukushayela izinwele nge-shampoos yobuchwepheshe
Lokhu kuhlanganisa imikhiqizo equkethe amaprotheni kanye ne-keratin. Lezi yizinto ezenza izinwele. Lawa ama-shampoos ochwepheshe abizayo. Abanayo ama-polymers asezingeni eliphansi futhi ama-surfactants.
Ukunikeza ivolumu izinwele nama-gel kanye nama-mousses
Uma ujwayele ukusebenzisa uhlobo oluthile lwe-shampoo elingakuthembisi umphumela wokuziphendulela, kodwa ufuna ukuba nekhanda elihle kakhulu, bese udinga ukusebenzisa izindlela eziyinhloko zokwandisa ivolumu, lo mousse we-styling. Ngemva kokugeza, sebenzisa inani elincane le-mousse ezimpandeni zezinwele ezihlanzekile. Gubha izintende zakho ngomunye nomunye bese usatshalaliswa ngokulinganayo le mousse kuyo yonke ubude bezinwele kusukela kumasu kuya ezimpandeni. Futhi uma usebenzisa isomisi sezinwele, akudingeki ukhohlwe kancane, ugoqa izinwele zakho ngeminwe yakho, ngaleyo ndlela udale ivolumu. Ungasebenzisa i-gel yokulungisa okunamandla kakhulu. Leli gel kulula ukuyisebenzisa, inani elincane lejel kudingeka lifudumele ezintendeni zezandla futhi lisetshenziswe ezinhlanzeni ezihlanzekile, ezomisiwe, zifake eminwe yakho, zinike izinwele isimo esifisa.
Ukunikeza ivolumu ngezinwele ngekhanda elungile
Uma izinwele ezincane
Ukunqunywa izinwele okuhle isisekelo sekhanda lezintathu ezintathu. Kungcono ukwenza izinwele zezinwele eziphakathi nobude obude nezinsimbi ezinezintambo. Ngokwesilinganiso, kufanele kunqunywe kanye ngamaviki amane noma ama-6. Ukunqunywa kwezinwele ezibunjwa ezahlukene kuzokwenza izinwele zibe zikhulu kakhulu.
Uma izinwele ezinde
Uma izinwele zide isikhathi eside, zibonakala zilula. Kodwa uma ungumthandi wezinwele ezimfushane, udinga ukwazi ukuthi ubude obuhle bezinwele ezinhle kubhekwa - phakathi kwe-chin ne-earlobes. Uma izinwele zigacekile kakhulu, khona-ke ngeke zikwazi, kanye nezinwele ezinde zibonakala zinzima.
Uma izinwele ezimfushane
Kudingeka zilungiswe "ngezinyathelo, kusukela kuma-bangs kuya ku-nape, khona-ke lokhu kulayishwa kungabuka ukunikeza ivolumu yezinwele.
Izinwele zingenziwa ngabachwepheshe
Ukunikeza ivolumu ngezinwele ezikhethekile imigqa eyadalwa ngezinhlobo ezahlukene zezinwele. Iqukethe uhla olugcwele lwemikhiqizo eyenza izinwele zivuke.
Umthamo wezinwele uzothuthukiswa
Ukwandisa ivolumu kuzovumela ubuchwepheshe ukwakha izinwele. Amandla akhethiwe ngokusho kwesakhiwo, umbala, ubukhulu, ubude. Izakhi zihlanganiswe ezimpandeni ebangeni elingu-1 cm. Qaphela ukuthi izinwele zakho ngaphambi kokukwakha kwakungaphansi kwamamentimitha angu-5. I-Capsule isayithi yokubopha, inomzimba omncane kakhulu, ifakiwe, ifakwe uphawu, cishe i-imperceptible futhi ikhethwe umbala wezinwele. Izinwele ezihlanganiswe ngale ndlela ziqinile futhi zingagqunywa izinyanga ezifinyelela ku-6.
Kuboya izinwele kwakukhulu, udinga ukwandisa kusuka kumaphesenti angu-100 kuya kwangu-150. Le nqubo ithatha isilinganiso samahora amathathu kuya kwangu-4. Uma kufika isikhathi sokususa izinwele, ungenza isandiso esisha sezinwele ngosuku olufanayo. Lezi zingxube ezifanayo zisetshenziselwa ukwakha kabusha okuphindaphindiwe. Izinwele ezibekiwe zingabekwa, zigobile, zidwezwe, zigaye. Futhi ukuzinakekela akufani nokunakekela izinwele zakho.
Ukunikeza ubuningi bezinwele ngosizo lwamaphuzu avelele, le ndlela ifanele bonke
Le ndlela ibizwa ngokuthi "ama-highlights aseMelika", izobukeka ijonge ivolumu, futhi ihlinzeke izinwele ukuba zibukeke ngokuphilayo. Njengomthetho, khetha eyodwa, emibili, kodwa emithathu, emine yepende. Futhi amathoni amaningi, umphumela uzoba mnandi kakhulu. Lokhu kugcizelela ukubukeka kuhle kakhulu kunwele ezimnyama kwanoma yisiphi ubude.
Funda futhi: Ukugqamisa kwe-American on izinwele ezimnyama
Ngendlela i-melirovanie engcono kakhulu ekwenzeni isitolo se-barber. Lolu hlobo lombala lunenqubo eyinkimbinkimbi kakhulu, hhayi yonke inhloko ezoyithatha. Uma unquma ngale nqubo, akudingeki ukuba ugcine imali. Uzoduma kakhulu kakhulu.
Ngezinwele ezikhanyayo nezinwele, "mahimsh" ubonakala enhle. Yenziwe ngopende elingenayo i-perhydrol, nge-addition wax ku-base cream. Akunakwenzeka ukufeza izintambo ezimnyama, ikakhulukazi, ukuthi "mahimsh" ingaba i-hue egolide egolide ezinwele.
Ubuningi bezinwele buxhomeke ekutheni
Ngokuvamile zisetshenziselwa ukwenza ama-curls nama-curls anika izinwele zibe ivolumu.
Kuyinto insimbi, eguguwe yingxenye encane ekugcineni komileli. I-diffuser ivumela ngokusebenzisa izimbobo eziningi i-jet enamandla emoyeni, umoya uba mnene futhi ulula. Phezu kwalesi sikhwama kukhona "iminwe", badala ivolumu bese bephakamisa izinwele ezimpandeni.
Kusukela ezimpandeni kuya kuzicathulo
Ukuze izinwele zibe zivalo, uma usomile izinwele, sebenzisa isomiso eshisayo, hhayi eshisayo. Gcina idivaysi ibanga elingamamitha angu-15 ukusuka ekhanda, ngaphandle kwalokho izinwele zingomiswa, zilahlekelwa ukukhanya kwazo kwemvelo futhi zizobonakala zibe zinyama. Futhi ukuphela kwezinwele kungomiswa futhi umoya oshisayo.
Ukwazi ukunikeza ivolumu izinwele zakho ezincane, ungasebenzisa amathiphu ahlukahlukene kanye nezindlela zokupheka ukuze wenze izinwele zakho zibukeke ziluhlaza futhi zilungiswe kahle. Esikhathini sezinwele noma yikuphi inkosi ezokwenza umdwebo, izokweluleka, ukuthi kungenzeka kanjani ukwenza izinwele zezinwele ezincane. Kodwa wazi, ngezinwele zakho ungenza izinto eziningi ngokwakho.
Amaski wezinwele ezinzima: zokupheka ekhaya zokupheka
Hair Hair Recipes
Indlela yokuvikela izinwele kusuka elangeni?
Ukunakekelwa kwezinwele ukulwa nezinwele
Ukuncenga izinwele: izinhlobo nobuchwepheshe
Ikhanda lakhe lokunwebisa - ukuhluka kwekhanda le-photo
Imfihlo emihlanu ye-velvety matte isikhumba: makeup hhayi kuphela
Amadonsa amazambane nge isipinashi
Ukulimala - ukulimala kwamadolo
Sichitha amakholori, senza ibhizinisi
Ama-coat oatmeal ngobisi ukhilimu
I-Vitamin Berry yaseMadlie
Ukushayela nge-panna yekati nemifula
Uthando lweqiniso: izimfihlakalo zothando ngaphambi komshado nomshado
Indlela yokunquma ukuthi ingane ikhula eminyakeni emibili